Amandla Ezinhlelo Zokuxhaswa Kwezimayini Nezinqumo | Martech Zone
Amandla Okusetshenziswa Kwezimayini Zedatha nezinhlelo Zokusekela Izinqumo
Lwesibili, Disemba 10, 2013 NgoMsombuluko, Disemba 9, 2013 Douglas Karr
Le infographic evela eNew Jersey Institute of Technology ikhombisa i-Data Mining and Decision Support Systems, ichaza izinqubo ezine ezihlukene ngaphakathi kohlelo lonke.
Ukuphathwa kwedatha - Iqoqa imininingwane inkampani etholakala ekuthengisweni kwayo, kumarekhodi, nasemibikweni yamakhasimende.
Ukuphathwa Kwemodeli - imizamo yokwakha iziphetho ngamasu akhona ebhizinisi ukubona ukuthi ayaphumelela noma cha.
Injini Yolwazi - kubukeka ukudala ama-paradigms amasha ukuze ahlanganyele namathrendi.
Isixhumanisi somsebenzisi - ivumela ukuxhumana kudatha uqobo.
Okokuqala, ukuphathwa kwedatha, kuqoqa imininingwane inkampani etholakala ekuthengisweni kwayo, kumarekhodi, nasemibikweni yamakhasimende. Abaphathi bemodeli bazama ukudala iziphetho ngamasu akhona ebhizinisi ukubona ukuthi bayaphumelela noma cha. Injini yolwazi ibheka ukudala ama-paradigms amasha ukuze ahlangane namathrendi. Ekugcineni, isikhombimsebenzisi somsebenzisi sivumela ukuxhumana kudatha uqobo. Ingxenye ngayinye yohlelo ingashayela enye ingxenye.
Tags: Ukuphathwa kwedathaimininingo yedathainjini yolwaziucwaningo lwemaketheukuphathwa kwemodeliisikhombimsebenzisi somsebenzisi
Douglas Karr Tuesday, December 10, 2013 Monday, December 9, 2013
I-Interactive Infographic Trend
Izinyathelo Eziyisikhombisa Zendaba Ephelele
Jan 13, 2014 ngo-8: 15 PM
I-infographic esiza kakhulu ekusetshenzisweni kwemayini yedatha. Siyabonga ngokwabelana ngolwazi olufanele.